> Resource > Ladnaansho > Recovery M4A: Ladnaansho tirtiray ama musuq M4A Faylal ay si sahlan
Sidee inuu ka soo kabsado files M4A?
File M4A, sidoo kale loo yaqaan Apple sameecadda Encoder, waa qaab maqal ah in ay la mid tahay file MP4. Faraqa kaliya ee u dhaxeeya ay tahay in file M4A ku jira video ma gudaha. Sida file maqal ah, waxaa la isticmaalo ee Windows computer, computer Mac, ciyaaryahan oo kala duwan music. Si kastaba ha ahaatee, M4A khasaaro file weli waxaa keeni kara tirtirka aan habboonayn, musuq-maasuq iyo ciyaartoyda music dhaawacan ama khaldan. Haddii aad rabto in aad soo kabsado kuwa lumay ama musuqmaasuq files M4A, waxaad u baahan tahay barnaamijka M4A saddexaad-qayb ka mid ah.
Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa barnaamij awood leh oo caawiya in aad ka bogsato files M4A effortlessly. Waxa ay taageertaa M4A ka soo kabsanaya ciyaartoyda music, kombiyuutarada, drives adag dibadda iyo kaararka lagu kaydiyo.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Photo Recovery hoos ku qoran. Version maxkamad ayaa aad u saamaxaaya in ay iskaan qalabka si aad ku hubin kartaa in files M4A helay barnaamijkan waa waxa aad rabto inuu ka soo kabsado ama aan.
Qabtaan M4A Recovery ee 4 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: tutorial Tani waxay ku salaysan tahay Wondershare Photo Recovery for Mac. Dadka isticmaala Windows, fadlan kala soo bixi Wondershare Photo Recovery for Windows oo akhri ay hage user .
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya barnaamijka, waxaad heli doontaa 2 kabashada hababka uu ka soo xusho interface bilowga.
Si aad u soo kabsado tirtiray ama laga badiyay files M4A, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" hore. Waxay bixisaa filenames asalka ah ee files M4A aad.
Haddii hab aysan taasi si fiican u shaqeeyo, waxaad isku dayi kartaa "ceeriin Recovery". Waxay u baahan tahay waqti dheeraad ah oo aanu ku soo bandhigaan filenames asalka ah.
Tallaabada 2 Dooro Hard Drive Waxaad u Khasaaray Faylal ay leeg,
Sida aad ka arki kartaa sida ay interface, drives adag iyo aaladaha kaydinta dibadda oo dhan lagu baari doono barnaamijkan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan drive adag meesha aad badiyay files M4A in iskaan. Waxa kale oo aad soo kaban karto, M4A files ka qalab lagu kaydiyo ay u xirmaya Mac aad.
Si aad u soo kabsado files M4A, fadlan dooro "Audio" by click "Select File ture" si loo tijaabiyo natiijada scan.
Fiiro gaar ah: Waad joojin kartaa sawirka inta ay socoto haddii aad ka heli files M4A aad rabto adigoo riixaya "Jooji" button.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Magacyada Khasaaray M4A faylasha iyo kaban ee Mac
Halkan waxaan ku soo tallaabada final. Marka qasac ka baxayo, faylasha helo waa la qori doonaa fayl. Waxaad ku eegaan karo helay files M4A adigoo gujinaya fayl. Waxaad soo kaban karto, files M4A eegista iyo badbaadin on your Mac.
Notes: Ammaanka ee soo kabashada, fadlan ha ka badbaadiyo files soo kabsaday meeshii aad lumeen dib.